Usihlalo weWILL, uSolwazi Thirumala Govender, uthe lomkhankaso awuphelelanga ekuqwashiseni umphakathi ngezinga lokudlwengula kuleli kuphela, kepha ubuhlose nokukhuthaza abanukubezekile ukuba bakwazi ukubhekana nobunzima obulandela isigameko ngokubacobela ngolwazi olubalulekile. Umkhankanso uphinde wazisa izihambeli ngezinyathelo ekumele zizithathe uma zona kumbe amalunga omndeni, abangani, nabanye ekumele bazithathe uma bezithola benukubezekile.
‘Abafundi beKolishi basazohlangabezana nabantu besimame abanukubezekile ezifundweni zabo nangenkathi sebethwele iziqu zabo. Lomkhankaso uhambisana nezinhlelo zeKolishi ekubaqeqesheni ukuthi bakwazi ukumelana nezimo ezahlukahlukene, kakhulukazi ukusiza abantu besifazane abadlwenguliwe.’
UDkt Kantharueben Naidoo onguchwepheshe kwezempilo kanye nezomthetho osiza abantu abadlwenguliwe, uthe kusemqoka ukuthi abasebenza kwezempilo kanye nezomthetho wakuleli baqeqesheke ekukwazini ukusiza amalunga omphakathi anukubezekile ngokocansi. Uzwelo labo lunxantathu. Luyaduduza, lunakekele ezimpilo eziputhakhakathaka luphinde liqikelele ukuthi izinswelaboya zengamelwa ngokufanelekile umthetho waseNingizimu Afrika.
UNaidoo uthe ukudlwengula kungudlame oludinga ukuphuthunyelwa abazempilo. ‘Umunti odlwenguliwe uhlukumezeka ngendlela emangalisayo kanti abamye baze balahlekelwe yizimpilo zabo kulisi sigameko.’
Ngesimo sokuthi umphakathi usulahle ithemba kwabomthetho kanye nezempilo kuleli, lokhu kadala ukuthi uma umuntu esedlenguliwe angaqikeleli ukuyobika emaphoyiseni, athole nosizo lwasemtholampilo.
UNaidoo uthe kusakuningi okumele kulungiswe ezibhedlela kanye nasemaphoyiseni mayelana nokusiza abantu abanukubezekile. ‘Kushoda abasebenzi kanye nezinsizakusebenza; abasebenzi abaqeqeshiwe ngokwanele ukuhlangabezana nabantu abanukubeziwe ngokocansi; kuphinde kuthikameze indlela abasebenzi abazwelana ngayo nabo kanye nokungahambelani nemigomo nemibandela esemthethweni.’
Izihambeli zomkhankaso zathintwa yisehlakalo esavelela uNksz Jes Foord owadlwengulwa ngamadoda amane enkathini engekudala. UFoord, ekhuluma e-UKZN, wathi abantu baseNingizimu Afrika abazi ukuthi isizwe sethu sihle kanjani, kuwukuthi kukhona nezinswelaboya. Waphinde wagqugquzela abantu besifazane ukuthi bangafeli ngaphakathi, bakhulume ngizinto ezibahlukumezayo. ‘Udliwa umzwangedwa ongesizwa muntu kuwona uma ungakhulumi.’
‘Ngifisa ukuthi kubantu besilisa: “Angeke uthokoze uma kunganokubezeka unyoke kumbe udade wenu, ngakho-ke, ungaqhubi kanjalo nakwabanye.”.’
UKapteni Premhid wasemaphoyiseni aseMpilo wathi sonke isikhathi lapho uthula ubona umthetho wephulwa, nawe uyinxenye owenza kubhebhetheke lokhu. Waphide wathi kumele umphakathi uke uvakashele emaphoyiseni kanye nasezibhedlela zikuhulumeni, uzinbonele wona ukuthi isimo simbi kangakanani. Ehambisana nethimba lakhe, baqwashisa izihambelo ngakho konke abakwazi ukusiza ngakho emaphoyiseni, kanye nokumele kwenzimu ngumuntu odlwenguliwe, angesabi.
Abafundi batheleka ngothi lwabo begqoke njengodokotela. Abafundela ubuhlengikazi sebeqale ukusebenzisana neHis Church KwaRescue Project emphakathini waseMariannridge. Basebenzisana nomphakathi ukuthunga onodoli abanikwa abantu kanye nezingane ezihlukumezekile emphakathini ngesiqubulo esithi “Cha” ngodlame kunye nokudlwengula emphakathini nasemndenini.